top 8 Career Options la Mushaaraadka qaali ah in Hindiya
Ka hor inta raadinayaa shaqo, hal shay oo ah in qof walba guud ahaan aragto waa lacag ama mushaarka. Haa, hamiday waa waxa ay keenaysaa in ay guul laakiin dhamaadka maalinta, marka aad dib daal tago, oo dhan waxaad u baahan tahay waa qaar ka mid raaxo iyo raaxo. Sidaas, it’s always better to place your goal at a…
maalin Happy Australia 2018 Rajo, Quotes, SMS, Messages, Images, Costumes Happy Australia day 2018 Rajo, Quotes, SMS, Messages, Images, dharka : ciidaha soo socda waa maalin Jamhuuriyadda maalinta Hindiya iyo Australia ee Australia. And here we covered Happy Australia day 2018 wishes quotes SMS Messages to our visitors and readers. In our previous articles we shared…
top 5 Jaamacadaha ugu wanaagsan ee Waqooyiga Hindiya
waxbarashada Professional ee Hindiya ayaa la siiyey badan oo muhiimadda ay leedahay in dhowrkii sano ee la soo dhaafay. Hindiya waxay leedahay taariikh ah oo aan la si horumarsan marka la eego waxbarashada sare. Laakiin wejiga in uu si guul leh ay ka gudbaan. Dad badan oo jaamacadaha ayaa sidoo kale la sameeyay dhawaan, kuwaas oo soo saara xirfadaha caalamiga ah. The Northern part of India…
Story koritaanka of Mobile boorsooyinka ka dib markii Demonetization